Home > ယောဂနည်းပြသင်တန်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်တက်ရောက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန၊ ယောဂနည်းပြသင်တန်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်(၉)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိအားက စားရုံ (B)ရုံ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးH.E Mr Saurabh Kumar၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များဖြစ်ကြသော ဦးထွန်းမြင့်ဦး၊ ဦးကျော်ဆန်း၊ ဦးကျော်ဦးနှင့် တာ၀န်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Asawari Bapat၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တာ၀န်ရှိသူများ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ယောဂနည်းပြဆရာမMs. Mansha Agrey၊ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အစီအစဉ်အရ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယောဂကျင့်စဉ်သည် ရှေးကတည်းက ပေါ်ပေါက်လာသည်ကို စာပေအထောက်အထား အခိုင်အမာများစွာရှိပါကြောင်း၊ ယောဂကျင့်စဉ်ကို အမျိုးအစားအမျိုးမျိိုးနဲ့ လူအများ စိတ်ပါ၀င်စားကစားနိုင်အောင် အမြဲကြိုးစားနေသည်ကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယောဂကျင့်စဉ်သည် လူ့ခန္ဓာ၏ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါကြောင်း၊ လူ၏ခန္ဓာနှင့် စိတ်ကိုယှဉ်တွဲ၍ လုပ်ဆောင် ရသော အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေသော လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ ပျော့ပျောင်းညင်သာသော ပုံစံအမျိုးမျိုးကို တွေ့မြင်နိုင်ပါကြောင်း၊ ယောဂပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လူတွေအားလုံး စိတ်ပင်ပန်းခြင်းကို လျှော့ချစေနိုင်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို လျှောချစေနိုင်ခြင်း၊ နှလုံးနှင့် ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်စေခြင်း၊ စိတ်ကျရောဂါခံစားရမှုကိုလည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်စေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရသော နာကျင်မှုဝေဒနာများအား လျော့ကျစေနိုင် ခြင်း၊ အိပ်ပျော်စေခြင်း၊ လူ၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အကြောအဆစ်များအားလုံး ပျော့ပျောင်းညင်သာလာခြင်း၊ လူ၏ခန္ဓာကိုယ်၏ အသက်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းနှင့် အသက်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုတိုးတက်လာစေနိုင်ခြင်း၊ လူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေသော ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကိုလည်း လျော့ကျလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူ၏ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်လာနိုင်စေပါကြောင်း၊ ယောဂကစားခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့၏ အသက်၊ ဘ၀လမ်းကြောင်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယောဂကို ဆေးဝါးကုသသောနေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုနေသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယောဂလေ့ကျင့်စဉ်သည် မြန်မာပြည်တွင်လည်း ရှေးယခင် ကတည်းက ရောက်ရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာကြီးတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုများကို အထောက်အကူပြုပါကြောင်း၊ တက်ရောက်လာကြသော သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများအနေဖြင့် ယခုသင်တန်းမှ လေ့ကျင့်ပေးလိုက်သော ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများကို မိမိပတ်၀န်းကျင်တွင် ပြန်လည်အသုံးချ စေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးH.E Mr Saurabh Kumar မှ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံအကြား ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှု ပိုမိုရရှိလာစေသည့်အတွက် ၀မ်းသာဂုဏ််ယူမိပါကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့သည်လည်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများ ဆက်နွယ်မှုရှိပါကြောင်း၊ ယခုသင်တန်းတွင် သင်တန်းနည်းပြဆရာမဖြစ်သော Ms. Mansha Agreyမှ အကောင်းဆုံးတာ၀န်ယူ သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုသင်တန်းသည် အခြေခံ သင်တန်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုသင်တန်းအောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ပြီးပါက နိုင်ငံတကာအဆင့် ယောဂသင်တန်းတစ်ခုကို ရန်ကုန်(သို့မဟုတ်) နေပြည်တော်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြား သွားနိုင်စေရန် မိမိအနေဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Asawari Bapat မှ အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ယောဂနည်းပြဆရာမ Ms. Mansha Agrey မှ ယောဂ ကျင့်စဉ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဌေးအောင်မှ ယောဂသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ လူသားတိုင်း အနေဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ/ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရန် လွန်စွာအရေးကြီးပါကြောင်း၊ ယောဂလေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သော စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု အားကောင်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ယုံကြည်မှု၊ပျော်ရွှင်မှု တိုးပွားလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာစွမ်းအား မြှင့်တင်ပေးပြီး ဖျားနာခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှု အားကောင်းလာပြီး အသားအရည်ကြည်လင်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ ကျစ်လစ်သန်မာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အောက်ဆီဂျင် ပြည့်ပြည့်၀၀ရရှိစေခြင်း၊ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပျော်စေခြင်းစသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်မှ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E Mr Saurabh Kumar၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးDr. Asawari Bapat နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ယောဂနည်းပြဆရာမ Ms. Mansha Agrey တို့အား အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
Source URL: http://spedmyanmar.com/content/%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%82%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%86%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%B2-%E1%80%96%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%81%8A